DRC အကြောင်း - DRC
Ks 100,000 + အထက်ဝယ်ယူပါက ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။|
All Categories ဟိုတယ်စောင် ကိုရီးယားစောင်များ ချည်စောင် အမွှေးပွစောင် ကလေးစောင် အိပ်ယာခင်း ခြင်ထောင် သိုးမွှေးစောင် ဖျာ ယိုးဒယားပစ္စည်းများ
DRC Blanket Factory သည် အရည်အသွေး အကောင်းမွန်ဆုံး စောင်များကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လက်လီ၊လက်ကား ရောင်းချပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဝယ်ယူအားပေးနေကြသော customer များအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ DRC Blanket Factory ၏ စက်ရုံသည် မင်္ဂလာဒုံတွင် တည်ရှိပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ဝယ်ယူအားပေးပြီးပြန်လည် ရောင်းချသောဆိုင်ပေါင်း အခိုင်အမာ ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးဖြင့်စံချိန်မှီ ထုတ်လုပ်သောကြောင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အောင်မြင်မှု အပြည့်အဝ ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုလဲဖြစ်ပါသည်။
“ Customer ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုသည် DRC Blanket Factory ၏ အမြင့်မားဆုံးသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ”
Covid-19 ကာလမှစ၍ customer များ ဝယ်ယူမှုအဆင်ပြေရန်အတွက် အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှုစနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Customer တွေရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်နှင့် သယ်ယူစရိတ်သက်သာစေလိုသော ဆန္ဒကြောင့် အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
To Supply consistentlyasuperior quality gamut of blankets at moderate rates. အရည်အသွေးပြည့်မှီသာလွန်ကောင်းမွန်သောစောင်များကို သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းဖြင့်တင်သွင်းရောင်းချနိုင်ရန်။
To Upgradeatrusted blanket factory in Myanmar. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောစောင်စက်ရုံအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
Commitment to do every work excellently. Commitment to maintain quality production. Commitment to work fairly and ethically. Commitment to make each customer happy and satisfied. Commitment to make working environment employees happy and safety.
မိမိတို့တာဝန်ယူသော အလုပ်တိုင်းကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်ပါမည်။ မိမိတို့တာဝန်ယူသော ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်း၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ မိမိတို့တာဝန်ယူသော အလုပ်တိုင်းကို ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီမျှတစွာ လုပ်ကိုင်ပါမည်။ မိမိတို့တာဝန်ယူသော ဖောက်သည်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအား စိတ်ချမ်းသာကျေနပ်စေရပါမည်။ မိမိတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
1. Discipline (စည်းကမ်းရှိမှု)
2. 100% Responsibility (၁၀၀% တာဝန်ယူမှု)
3. Mutual Respect (အချင်းချင်းလေးစားမှု)
4. Team Work (စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မှု)
5. Continuous Learning (စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူမှု)
6. Innovation (ဆန်းသစ်တီထွင်မှု)
7. Relationship (ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှု)
8. Customer Care (ဖောက်သည်များကို ဂရုစိုက်မှု)
9. Loyalty (သစ္စာရှိမှု)
DRC is the one of the best Carpets and Blankets distibution and Factory in Myanmar. read more...
Address: Building (8), Room (3), Hninsi St, Mingalar Taung Nyunt Tsp., Yangon.
Phone: (+95) 09 420185949, (+95) 09959888888
၂ ထပ်ကလေး (ကောင်း)
Ks9,000 – Ks750,000
Ks5,000 – Ks400,000
Ks9,000 – Ks730,000
© DRC Blanket Factory 2022. All Rights Reserved. Powered by MISL.